Ungave ndave ndakaroorwa kwemakore, kana vachiri mukutanga maitikiro ane ukama, vaviri vaviri Inogona kubatsirwa kubva panguva yemhando yekushandisa pamwechete. Zviri kunyanya akanaka kuedza kuti Day Valentine. Kuenda nechitima ndiyo nzira yakarurama kutanga kudanana uye hanimunu uchapukunyuka nemunhu wawaida. Makarindira chinyararire kumaruwa kana pamusoro pamakomo. Kuyambuka kare fadza, Maguta ekare kana pamwe nemahombekombe ane glacial nyanza. Heano pamusoro 5 vakawanda kudanana chitima nzendo mu Europe. Mumwe anopa chinhu chinokosha nokuda Day Valentine.
London kuti Venice ndirwo Rwedu Rwekutanga Kudzidzisa Chitima
Kutaura chitima kuburikidza neFrance iwe uchave wakaratidzwa kune rakakurumbira ruvara uye mwenje wenyika. Kubva elavender minda nezvisungo Cote d'waAzuri yebhuruu mvura. Usashamisika panguva iyo yendarama chezuva magic immerses zvose, uri kuti vaitire. Kutangira muna zvikuru kudanana guta ose, Paris, wako njanji rwendo achapfuura uchinakidzwa coastlines pamusoro mahombekombe inoshamisa. Uchadaro zvakare ona misha inoyevedza uye sunflower uye minda Provence elavender.
Iwe nemudiwa wako munogona kufamba nechitima pakati pemaguta maviri anoshamisa sezvo kumaruwa akaisvonaka eItari anotambanuka apfuura hwindo rako rekutakura. Zvechokwadi ichi ndechimwe chezvinhu kudanana chitima nzendo mu Europe.
Chikamu ichi zvishoma njanji anoshumira vashanu Italian Riviera misha ye Cinque Terre mu kunoshamisa fashoni. The chitima rwendo idukusa kweawa imwe nzira, saka tora chitima imwe nzira. Zvadaro unogona kupedza zuva Hiking kunoshamisa musha-unobatanidza mudungwe munzira kudzokera apo iwe watanga. ichi chitima rwendo Zvechokwadi zvinoshamisa pamwe pfungwa Gungwa Ligurian, Wedding nemisha, yakabatana yemizambiringa uyewo noutano minda.
Tanga dzenyu kudanana chitima rwendo muna Zurich. Visit Bahnhofstrasse, chimwe chezvinhu kwezva kunotenga migwagwa munyika, uye kutenga memento. Usashamisika panguva zvinokosha mabasa Van Gogh uye changes panguva anodiwa Kunsthaus nounyanzvi garari. Pane zvakawanda zvekuti vaviri vakaroorana vaite muZurich vasati vanyura munzvimbo dzakanaka chitima tasva kuna Innsbruck. Travel mumahombekombe Lake Zurich kurutivi zvinoshamisa Alpine girl. Muenderere wo nomunyika Vakamupfekedza Mafuro gomo uye Vistas zvinoshamisa. Chii chaigona kuva uchidanana?
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#rudo London da zvideo travelflorence travelnice travelparis travelrome chave